Kachin Duwa: ဆရာစားချန်တဲ့ ဥပဒေ တွေကြောင့်ပါ။
ဆရာစားချန်တဲ့ ဥပဒေ တွေကြောင့်ပါ။
လက်ပံတောင်းတောင်အရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသည့် ကိုမိုးသွေးနဲ့ ကိုအောင်စိုးတို့အား ရွှေဂုံတိုင် ဗံဒါပင်မှတ်တိုင်တွင် လုံခြုံရေးများမှ အတင်းဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။
(အပေါ်က သတင်း နဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို
The Myanma Age မှ ကူးယူတင်ပြပါသည်။)
ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှု ဆိုသည်မှာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရ ဖြစ်သည်။ ဒီလို ခွင့်ပြုချက်မပေးထားတဲ့ ဥပဒေ ရှိရင်လဲ ပြင်ရပါမည်။ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခိုင်းတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ၊ အဲဒီ ခွင့်ပြုချက်ပေးနိုင်တဲ့ အာဏာပိုင်တွေကို မကျေနပ်လို့ ဆန္ဒပြပါမယ် ဆိုရင် ခွင့်ပြုနိုင်ပါ့မလား?
တကယ်တော့ ယုတ္တိမရှိတဲ့ နည်းဥပဒေကို ထုတ်ထားတာပါ။
ဟိုတလောက သမ္မတကို ကြိုဆိုတဲ့ အဖွဲ့တွေလဲ ဆန္ဒ ပြတဲ့ သဘောပါ။ ဘာခွင့်ပြုချက်တောင်းတယ် လို့မှ မကြားမိပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် တောင်းဆို စီတန်းလှည့်လည်မယ် ဆိုတော့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းတဲ့ လူတွေကို ခွင့် မပေးတဲ့ အပြင်၊ ဖမ်းစစ်ခဲ့တယ်။
တကယ်တော့ ပြည်သူတွေကို ဖိနှိပ်တဲ့ ဥပဒေကို ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဆိုပြီး အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုတာ အဆိုးဆုံး ဖြစ်သည်။
ဒီလို ဆရာစားချန်တဲ့ ဥပဒေ တွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရပြီး၊ ဖဆပလ ခေတ် ကတည်းက ဗဟိုအစိုးရကို ဦးထိပ်ထားလာခဲ့တဲ့ ဗမာ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များ အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသ တွေအတွက်ပဲ စဉ်းစားပြီး ဥပဒေတွေကို ထုတ်လာရာက အမွေခံလာခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေပါ။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိဘူး ဆိုတာလည်း၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု ယန္တရားကို တိုင်းရင်းသားတွေ မသိအောင် လျှို့ဝှက်လာရာက တတိုင်းပြည်လုံး အမှောင်ဖုံးသွားခဲ့ရတယ်။ တိုင်းရင်းသား (ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊) တွေကို အပြင်လူအနေနဲ့ သတ်မှတ်လာတဲ့ ခေတ်ကာလ တွေရဲ့ အကျိုးဆက်တွေပါ။
ဒီတော့ ဆရာစားချန်တဲ့ နည်းဥပဒေ တွေ ဆက်လက် ရှင်သန်နေသေးသ၍ မြန်မာပြည် ဘယ်တော့မှ ဒီမိုကရေစီ မရပါ။
Posted by Du Wa at 10:15 PM
Labels: ဗီဒီယိုသတင်း, သတင်းသုံးသပ်ချက်, အတွေးအမြင်
ရန်ကုန်မှာ ကချင်အလံ ထောင်နိုင်ပြီ....
Amyu Sha Yawng hpang de....
ဗမာ လက်နက်ကိုင်ရင် အစိုးရတဲ့။ ကချင်တွေ လက်နက်ကိုင်...
ဖက်ဒရယ် အကြောင်း လေ့လာရန်။
၂၀၁၂ မှာ Gangnam Style နောက် ဒုတိယ လိုက်သော ဂီတ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး၏ တစ်နေ့တာ (ရုပ်သံမှတ်...
၂၀၁၂ အတွင်း ထိုးစစ်မဆင်ပါဘူး၊ ရိပ်ခါလာပို့တာပါ၊ ဆု...
Burma VJ: အောင်ကျော်စော နဲ့ အမေးအဖြေ
Jason Mraz နဲ့ လူကုန်ကူးမှု တစေ့တစောင်း
မြန်မာ့ ဈေးကွက် စီးပွါးရေး စနစ်လား?
လက်ပံတောင်းတောင်အရေး နှင့် မြေယာပြသနာအပေါ် ဥပဒေစိုး...
ကိုယ့်ပြည်နယ် ကိုယ် အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့် တောင်းတာ ဘ...
လဂျားယန် တိုက်ပွဲတွင် အရှင်ဖမ်းမိတဲ့ မြန်မာအစိုးရ ...
တစ်သိန်းခွဲကို တန်ဖိုးနည်း ဖုန်း တဲ့။
Western Union မှ တဆင့် ငွေလွှဲနိုင်တော့မည်။
ဆွိဒင် လုပ် လက်နက် မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ် သုံးလို့ စ...
ဆန္ဒပြတယ် ဆိုတာ အလုပ်မရှိလို့ မဟုတ်၊ မတရားမှုကို မီး...
၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာမှာ နောက်ဆုံးရက်သတ်မှတ်ပြီး ဖြိုလိုက်ေ...
တရုတ်ကြေးနီတူးဖေါ်ရေးကြောင့် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကြာပြ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်း အပိုင်းအစ တချို့
NLD ကို ဝေဖန် ပါရစေ။
ကချင်ပြည်နယ် အတွက် အခြေခံ ဥပဒေ မူကြမ်း ၂၀၀၆
မြန်မာ နိုင်ငံ အတွက် ဖယ်ဒရယ် အခြေခံ ဥပဒေ မူကြမ်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖယ်ဒရယ် အကြောင်း စပြောပြီ..
ဦးပိုင် တိုက်ကွက် လာပြီ............
ဒီလို အဆဲအဆိုကြမ်း၊ အရိုင်းအစိုင်း အုပ်စုတွေ အုပ်ခ...
မြန်မာနိုင်ငံကို နျူကလီးယား လက်နက် အစီအစဉ် ဆက်လုပ်...
Oppa ဦးပိုင် စတိုင်လ်
စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် စခန်း ဗမာ စစ်တပ် အကြမ်းဖက် မီးရှို့...
ဦးပိုင် ကုမ္မဏီ ကြောင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်န...
ပူတာအို ကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ပေးမယ်တဲ့။
Duwa Kachin Facebook ပေါ်မှ အဆိုကြမ်းများ
အားလုံး ကိုချုပ်ကိုင်ထားတဲ့-ဦးပိုင်နှင့် မြန်မာ့စ...
လက်ပံတောင်း တောင် အကြမ်းဖက်မှု ကေအိုင်အို ရှုတ်ချ
မြန်မာ ပြည်သားတွေ လွတ်လပ်ရေး မရသေးပါ။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် များ အနေနဲ့...
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဌအဖြစ်...